Die tichiwisira, Aluminum Sand tichiwisira, nemazvo CNC machine - Innovaw
Ningbo INNOVAW nomuviri CO., LTD ari nyanzvi akaigadzira Kudzingwa uye machine psac chikamu iro zvikuru kushandiswa Automotive, Medical, earthmover, peturu, magetsi uye okuvimba Industry. Vachipedzera zvebhizimisi-refu nezvavatorwa vatengi kubvira North America uye kumadokero Europe, tiri chaizvo kuziva chii mutengi zvinodiwa kana wavanotipa vanodhirowa uye zvinhu Specification. Uye ouinjiniya kwedu kunogona kureva yakanakisisa muitiro uye zvigadzirwa kuti rokuti kana chero magadzirirwo kuchinja kana zvakakodzera. Most mishonga yedu aivigirwa kuna Canada, USA, uye kumadokero Europe Germany, France, Italy, Norway, Finland, Switzerland, etc. uye kuhwina mukurumbira pakati makasitoma edu akanaka.
Ningbo INNOVAW uchafira Kudzingwa ndiye mutungamiri wenyika muna zvakarurama ikafa kukanda zingi, aruminiyamu uye magnesium alloys. View nyaya zvidzidzo kubva maindasitiri akasiyana-siyana pamwe chete mazano chinoumba uvandudze kuburikidza kufa kuraswa.
tiri TS16949 uye ISO14001 vaipupurirwa.
professinal akaigadzira achifa Kudzingwa tooling, mukuru kumanikidzwa kufa kuraswa, aruminiyamu giravhiti Kudzingwa, pasi kumanikidzwa kufa kuraswa, zvakarurama CNC machine anenge 20 makore.